IiNkcazelo zeNdlu ezizikholelwa ngabazali
(Kwaye Yintoni ephosakeleyo nabo)
Ukuba uhlala ekhaya (okanye uthathwa njengamaziko asekhaya) nokuba naluphi na ubude bexesha, mhlawumbi uyaziqhelanisa neziganeko eziqhelekileyo kunye nezindlu zasemakhaya . Ezinye iinkolelo zixhaphake kangangokuthi nabazali bezindlu zasemakhaya bangawaxhamla.
Musa ukuvumela le ngqungquthela ukuba ibangele ukungqubuzana okungadingekile kwimizi yasekhaya.
Abantwana basekhaya baxhamle
Nangona sikhanyela ngokukrakra ukuba amakhaya asemakhaya ayingqumbo, abazali abaninzi banenkxalabo yokuba bayinyaniso.
Sinoyiko lokuba abantwana bethu baqhelile kwaye kukuba konke kuba sihlala ekhaya. Olu loyiko lusenza sikwazi ukuxininisa kwiidiosyncrasies ezincinane kunye ne-quirks okanye uqale ngokubukela ngasese iimpawu zokuziphatha.
Ngaba umntwana wam unyanzelekile kwiimeko zentlalo?
Ingaba umntwana uthetha ngokungapheli malunga nokunyanzeliswa kwakhe kwangoko kubaphulaphuli abanamehlo abagubungele?
Ngaba umntwana wam unabantwana abaninzi?
Ngaba uyamenywa ukuba asebenze ngokukhawuleza aze adlale imihla?
Ngaba uyathula / ozwakalayo / ephumayo / entloni?
Akukho nto ephosakeleyo ngokuncedisa umntwana omncinci ukuba aqonde indlela yokuhamba ngeemeko zentlalo. Kukulungele ukumnceda ngendlela yokufunda ulwimi lomzimba okanye ubuso bombuso ukuqonda xa abanye bexhwabile okanye bengakhululeki.
Ingqiqo enhle yokubonelela ngamathuba omntwana wakho ekhaya ukuba enze abahlobo okanye uphando ngezizathu zokungabikho ukuba ngaba kunjalo ngokwenene.
Nangona kunjalo, ubuntu bomntu obusisiseko buya kufana nantoni na apho efundiswa khona.
Inkwenkwe ejongene ne-LEGOs, i-Star Wars, okanye i-Pokémon iya kugxininiswa nezo zinto njengomfundi ofundwa ngumfundi okanye umfundi ohlala ekhaya.
Intombazana ekhetha omnye omnye okanye ababini abahlobo abasondeleyo kwiqela baya kuba nokukhetha ekhaya okanye esikolweni.
Kukho abantwana abathandekayo kwisikolo sikarhulumente (ngokuqinisekileyo ukhumbule ezimbalwa) kunye nezingane ezinomdla kwizikolo zasekhaya.
Ingaba ubiza ngokuba yi-quirky, nerdy, geeky, eccentric, okanye ekhethekileyo, ubuntu bomntwana abukwayo apho uya esikolweni.
Abafundi basekhaya bafumana inkululeko ekhululekile yokuzikhupha okanye ukulandela ukuthanda kwabo. Basenokukhula ngokukhawuleza kunokuba bafana nabafundi babo (umzekelo, bebukela iipatto ezidlulileyo ubudala xa abantwana abafundiswayo bexutywa ngokuzijonga okanye bengenalo isoka / intombi eselula).
Abafundiswa ukuba bahambelane nesihlwele ngokugxeka okanye ukuxhatshazwa. Oku kungagqibekanga akuyonto. Ukuvumela umntwana ukuba abe ngowakhe.
AmaKhaya asekhaya ahlangene
Ngokufana neenkxalabo ezifihlakeleyo malunga nabafundi bethu basekhaya beyinqaba, abanye abazali banenkxalabo yokuba abantwana babo ngokwenene baya kuba bengabandakanyekanga kwaye abakwazi ukusebenzisana nabanye. Olu loyiko lunokwenza ukuba abazali babhalise umntwana wabo kwimisebenzi emininzi okanye bangakhathazeki ngokungabalulekanga malunga nomntu onobuqili.
Ukuba ungumzali wevemvane yentlalontle okanye umdlali wezemidlalo, umntwana wakho unokunandipha ekuhlaleni, kwiqela lezemidlalo, kwiiklabhu ezininzi, inxalenye yentsebenziswano, ilungu leqela elilingela iliso, kwaye likhokele kudlala ekhaya.
Kodwa mhlawumbi uziqhayisa wena kunye nomfundi wakho (kunye nekhredithi yakho!).
Ewe, abantwana abasemakhaya bayadinga amathuba okuba badlelane , kodwa oko akuthethi ukuba ubhalise kuwo wonke umsebenzi okhoyo. Kwaye, ngokuqinisekileyo akufanele wenze njalo ukuze ubonakalise umntanakho, wena, ummelwane wakho, okanye isihlobo esinentsingiselo yokuba abantwana bakho bahlalisana. Yenza imali kwimisebenzi embalwa ebonisa ukuba abafundi bakho bayonwabele kwaye bafikelele kwishedyuli yakho kunye nebhajethi yakho.
Musa ukukhathazeka ukuba umfundi wakho unomdla kwizinto ezininzi. Abanye abantwana ngabangqungquthela bemvelo abavakalelwa ngokomzwelo nangokwenyama bebaninzi ngemisebenzi yabantu abaninzi.
Ezinye iibhola zihamba ngezigaba zomdla. Ngokomzekelo, ngexa elinye, umncinci wam kuncinci kwiqela le-gymnastics elikhuphisanayo elidibene rhoqo kathathu ngeveki ukuqhuba. Kwakhona wathatha izifundo ze-vocal kwaye waya kwintlalo yoluntu kwiminyaka emibili ngenyanga.
Oku kulandelwa yonyaka apho engabandakanyekanga kuyo nayiphi na imisebenzi yangaphandle. Ndandingakhathazeki. Kungekudala ngaphambi kokuba ndimkhwelise ngeenxa zonke kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Bonke aBafundi basekhaya baLungiselelo loMntwana
Ngokusekelwe kwiindlela eziqhelekileyo, kubonakala ngathi zizinto ezimbini kuphela zokukhetha abafundi abasemakhaya. Bayabafundi bezemfundo abangenakukwazi ukuyenza kwilizwe lenene, okanye bangabantwana abahamba phambili bezemfundo, bawine impumelelo yokupeliswa kwesizwe, kunye neekholeji ze-graduate kwi-16.
Bobabini abagqithisileyo babonakala bengenele iingqondo zabazali abaninzi abahlala ekhaya, kubangela ukuxinzelela kwabo kunye nabantwana babo. Ingqondo yomntwana ingabangela ukuba abazali babeke uxinzelelo olunzulu lwezemfundo kubantwana babo kwaye bayeke ukuqonda izipho zakhe ezikhethekileyo kunye neetalente.
Kungabangela uxinzelelo olungadingekile kubazali bezingane ezinemakhaya abanenkinga yokufunda . Abazali bangashukumisela umntwana ukuba afunde , umzekelo, ngaphambi kokuba ulungele ukuphuhlisa okanye akhathazeke ukuba ayenzi ngokwaneleyo emakhaya abo .
Le nyaniso kukuba abantwana abahlala emakhaya bahlala bekhukhuma kubafundi abanesakhono, njengabalingani babo abafundiswa zikarhulumente. Abafundi abaninzi abanamakhaya, njengabaninzi bebafundi abafundiswa ngabafundi, ngabafundi abaphakathi.
Oko akuthethi ukuba sifanele sinciphise iimfuno zethu zemfundo kubafundi bethu. Kunoko, sifanele silindele ukuba basebenze ngokusemgangathweni kwamakhono abo ukuze bafikelele ekusebenzeni kwabo ngokupheleleyo - ngaphandle kokugxininisa ukuba amandla abo apheleleyo awabangakho ukuphakama kobugcisa.
Sifanele sivumele abantwana bethu basekhaya ukuba balandele ukuthanda kwabo ngelixa beqinisa iinkalo zobuthathaka. Kwaye kufuneka sikwazi ukubonelela ngamaziko okufundela abafundi abafundela abantwana ukuba baqhubekele ukuba baqhube nayiphi na imfundo okanye ikhefu emva kokugqweswa.
Abazali basekhaya bahlala bengavumi le ngcamango kodwa ngamanye amaxesha bavumela ukuba babangele ukwesaba nokungathandabuzeki. Oko kwenza iimbali zamangcipheko kuba yingozi kuba, ekuzameni ukulwa nokukhathazeka, sinokubeka uxinzelelo olungadingekile kunye nokulindela okungenangqiqo ngathi nakwabafundi bethu.
Ungavumeli ukuba ukwesaba amakhaya angamaqhinga asekhaya ahlasele ekhaya lakho nasesikolweni. Endaweni yoko, jonga abantwana bakho njengabantu abakhethiweyo abo kwaye bafaka ukungathandabuzeki okungenasiseko kunye nokuzoyika.
Ukushicilelwa kweMardi Gras
Usuku lokuSebenza lweSuku lwaBasebenzi
Ukudibanisa noMninimandla we-Sandalphon, i-Angel of Music